info Company / Xiriirada
Si aad u dardar Caalamiyeynta dunida ee technology luqadda multi-daruur +
Plucial waa, sida ay adduunka ka badan la yaqaan, waayo, dhammaan shirkadaha adduunka oo dhan, waxay bixisaa a afka multi-xal horumariyo u gaar ah.
Waa maxay sababta aannu xal luqadda multi-la doortay.
(Turjumaad Machine + turjumaad aadanaha)
0 Dalalka &amp; Local
(Si ganacsi ee suuqa waa qiyaasta adduunka)
ku saabsan 0 %
(Taageerada dadka isticmaala Internet adduunka oo dhan)
ku saabsan 0 Billion oo qof
(Guuleysan macaamiisha ka adduunka oo dhan)
Products in aan hadda u leeyihiin in ay dalab
GuidebooQ waa adeeg in ka dhigi kartaa kaliya 10 daqiiqo page a -KA luqadda multi-of kaalinta kasta oo adduunka ah. Waxaad ka raadsan kartaa in afkooda hooyo, oo waxay bixisaa macluumaad ah u socoto safarka ka badan wixii ay u safra adduunka oo dhan.
91 luqadood oo kala duwan
Doorashada iyo isku dhafka ah ee afka waa lacag la'aan
habka Simple turjumaad
Tarjumaadda dhamaato in kaliya 3 tallaabo
Suurtagalnimada in la beddelo content in la soo bandhigay for af kasta
SEO luqad kasta
afka oo dhammu optimized for search engine
Saxda ah sida menu luqadda multi-
Khabiirro aan loo baahnayn
Just u dooran karta talooyin fudud
GuidebooQ ayaa daabacay version Japanese hadda keliya,
diyaar u ah inay daabacaan waqti isku mid ah 200 dal oo dunida iyo gobollada waxaa hore u sameeyey.
Ma aha oo kaliya waraaqaha ee musaafiriinta shisheeye, hadda istaagi doonaa in ay kaalin dhan aad dhinaca si ay u dhoofaan.
Waxaa intaas dheer in ku daray kaliya seddex nooc oo Bogani in HTML, badala goobta -KA luqadda multi-ka halkaas oo HTML ah oo u dhiganta 91 luqadood.
Haddii aqoonta HTML iyo CSS aad hore u leedahay, waxaad la soo jeediyay karaa xal luqadda multi-in hadda macmiilka Iyadoo MulCMS.
Xataa iyada oo aan bixinta bilowga u dhexeeya
In si ay u ogaadaan adduunka qiyaasta dunida kuma filna naga xoog kaliya. shirkad ayaa doonaya in ay ogaadaan bulshada caalamka nala mustaqbalka, aanu ku siin doonaa a MulCMS xirmo daruur in aad si fudud u isticmaali kartaa our-af badan iyo technology daruur.
server aan loo baahnayn
Si aad u isticmaasho Cloud ee Platform Google, aqoon looma baahna at dhan oo ku saabsan server iyo kaabayaasha.
haya'ad xogta Dibadda
Auto Insert content ku haboon in HTML isticmaalaya xulista CSS.
Contact sidoo kale waa multi-hadla
Si loo go'aamiyo il baaritaan afka, awood u leh inay kuu soo sheegi by e-mail by tarjumidda qoraaladii asalka ahaa waa feature a caadiga ah.
Japan Fukuoka, Hakata-ku, Fukuoka City Hakataekihigashi 1-12-17 xafiiska New Gaea Hakata Station 3F
Bilaabay GuidebooQ in la abuuri karaa oo kaliya 10 daqiiqo ah 91 luqadood oo kala duwan oo ah tilmaame -KA in Japan ee ganacsatada maxalliga ah
qof kasta oo ay ka mid yihiin in saraakiil xawaaladaha iyo saxafiyiinta, waxaan sugeynaa baaritaan ka noocyo kala duwan oo dadka.
Boggan waa la jaan qaada 91 luqadood.